‘सारेगमप लिटिल च्याम्प’मा पुगेका नेपालका प्रितमको गीत सुनेर भावुक हुदै जर्जले भने प्रितम अब स्कुल छुट्टि माग ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywood‘सारेगमप लिटिल च्याम्प’मा पुगेका नेपालका प्रितमको गीत सुनेर भावुक हुदै जर्जले भने प्रितम अब स्कुल छुट्टि माग !
February 10, 2019 Tulasa Karki Bollywood, Event, News, Video 0
चर्चित भारतीय टेलिभिजन रियालिटि शो ‘सारेगमप लिटिल च्याम्प’को डिजिटल अडिसन पास गरि अर्को अडिसनमा सहभागी हुन भारत पुगेका ११ वर्षीय प्रितम आचार्यले अर्को अडिसन राउण्ड समेत पास गरेका छन् ।
उनले ‘सन्देशे आते हे’ बोलको गीत गाएर सम्पूर्ण जर्जहरूलाई आफ्नो तर्फ पारेका थिए । उनको गीत सुनेर सम्पूर्ण जर्जहरुले उनको खुलेर ताफित गर्नुका साथै आखाबाट आशु समेत खसालेका थिए । ११ वर्षको बच्चाको यो आवाजले पुरै स्टेजलाई रोमान्चक बनाएको थियो ।
प्रितम आचार्यले भारतको सारेगामापामा धमाकेदार प्रस्तुति ।
ईटहरिका हाम्रो भाई प्रितम आचार्यले दिए (भारतको) Sa Re Ga Ma Pa Li'l Champs show मा धमाकेदार प्रस्तुति ।जजहरूले पहिलाे प्रस्तुतिमै उत्कृष्ट भने ! भिडियो हेरेर सक्दो सेएर गर्नुहोला ।भिडियो मन परे, पेज लाइक!
OnlineJhapa ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2019
आचार्यका धेरै गित तथा कभर गीतहरु य़ुटुबमा भेटिन्छन । इटहरी ५ स्थायी घर भएका प्रीतम सङ्गीत र पढाइलाई सँगसँगै लगिरहेका छन् ।